मुख्यमन्त्री बन्न लागेका राजेन्द्र पाण्डेको दुवै हातमा लड्डु, योगेशहरुले साथ छाडेपछि डबल फाइदा ! – GALAXY
मुख्यमन्त्री बन्न लागेका राजेन्द्र पाण्डेको दुवै हातमा लड्डु, योगेशहरुले साथ छाडेपछि डबल फाइदा !
काठमाडौं । वागमती प्रदेशका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफू नै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको बताएका छन् । मंगलबार वागमती प्रदेशमा रहेका एमालेका ५६ मध्ये १२ जना सांसदले माधव नेपालको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन् ।
नयाँ पार्टीको पक्षमा लाग्नेहरुमा राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल, बसुन्धरा हुमागाई, रमा आले मगर, बसन्तप्रसाद मानन्धर, कुसुमकुमार काकी, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, मुनु सिग्देल, माधव पौडेल, कृष्ण खनाल रहेका छन् । पार्टी रोज्ने क्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले आफू स्वाभाविक रुपमा मुख्यमन्त्रीको दावेदार भएको बताएका हुन् ।
उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी बनाउने क्रममा लागेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा पनि सक्रियता देखाएका थिए । उनी पार्टीमा पनि प्रमुख नेताका रुपमा देखापरेका छन् । एमालेमा रहँदा उनीभन्दा पुराना भनिएका नेताले नेपालको साथ छोडेपछि उनी महासचिवको दावेदार हुन् । समाचारस्रोतका अनुसार उनी महासचिव भएर देशव्यापी रुपमा संगठन गर्न चाहन्छन् । पाण्डे मुख्यमन्त्री नभए यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुने स्वाभाविक रुपमा अर्को उम्मेदवार पनि छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा महासचिवलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । पाण्डे पुराना राजनीतिज्ञ हुन् । उनी धादिङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । पञ्चायतकालबाट नै राजनीति गर्दै आएका उनी संविधानसभाको २०७० को निर्वाचनमा धादिङ–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । एमालेको ९ औं महाधिवेशनमा शाक्यले नेपालको समूहबाट उपाध्यक्ष जितेकी हुन् भने पाण्डे उपाध्यक्षमै पराजित भएका थिए । शाक्य काठमाडौंबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकी हुन् । पाण्डे र शाक्य दुवैजना पूर्वमन्त्री हुन् ।
प्रष्ट विचार राख्न सक्ने र अडानमा प्रतिबद्ध रहेका उनले प्रदेशलाई एउटा कुशल नेतृत्व दिन सक्छन् भन्नेमा नेपाल पक्ष विश्वस्त छ । शाक्य संसदीय दलको निर्वाचनमा अहिलेका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसँग पराजित भएकी हुन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलका कारण पौडेल मुख्यमन्त्री भएका थिए । नेपाली कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री आए संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । भदौ २२ गतेसम्म प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पार्टी छानिसक्नुपर्ने छ ।
संघीय सांसद र केन्द्रीय सदस्यले भदौ ९ गते नै एमाले रोज्ने कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भन्ने टुंगो लगाइसकेका छन् ।
वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्ठलक्ष्मी शाक्यको पद धरापमा परेको छ । एमालेका १२ जना सांसद घटेपछि शाक्यसँग ४४ मतमात्र रहेको छ । सरकार बनाउन ५६ मत चाहिन्छ, यहाँ १ सय १० जना सांसद रहेका छन् । शाक्यलाई अरु पार्टीले समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । संसदमा उनले मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । केही दिन अघिसम्म नेपाललाई साथ दिएकी शाक्य भदौ २ गते एमालेमै फर्किएकी थिइन् ।
पार्टी विभाजनको लागि नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा गइरहेको बेला उनी एमालेको तर्फबाट नै मुख्यमन्त्री भएकी थिइन् । शाक्यलाई दलको नेता बनाउँदै निवर्तमान दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले स्वागत गर्दै बधाई दिएका थिए । पौडेलले दलको नेता छोडेर शाक्यलाई नेतासहित मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । शाक्य एमालेको उपाध्यक्ष हुन्, उनी अध्यक्ष ओलीको कटर आलोचक भनेर चिनिन्थिन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूलाई सजिलै हुँदा पक्कै पनि छोडेका होइनन् । झट्ट हेर्दा त्याग गरेजस्तो देखिए पनि यहाँ पनि अनेक षड्यन्त्रको गन्ध देखापरेको छ ।
यसअघि जतिसुकै अप्ठेरो पर्दा पनि पौडेल हलचल भएका थिएनन् । नयाँ गठबन्धनमा प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशबीच समीकरण हुने छ । १ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला रहेका छन् । उनी कांग्रेस सभापति देउवा पक्षीय होइनन् । देउवाले अर्को गुटका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाए आफू कमजोर हुने सम्झिए भने १ नम्बरमा नेपाल पक्षलाई छोडेर देउवाले बागमतीमा दाबी गर्न सक्ने छन् । वागमती देउवाको भागमा परे बानिया नै मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । बानिया देउवानिकट हुन् ।
बानिया २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा कम्युनिष्टको गढलाई तोड्दै मकवानपुर–१ बाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन् । बानिया मकवानपुरका पार्टी सभापति पनि हुन् । उनी पूर्व गृह राज्यमन्त्री र पर्यटन राज्यमन्त्री हुन् । बानिया साविकको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर अर्को क्षेत्रमा गएर उम्मेदवार भएका थिए । बानियाको क्षेत्रमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो ।
बानिया संविधानसभामा निर्वाचित मकवानपुर–१ मा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उम्मेदवार बनेका थिए । थापाले आफ्नै गृहजिल्लामा हारे । नेकपाको दबदबा रहँदा पनि त्यही क्षेत्रबाट २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा मकवानपुर–४ बाट निर्वाचित एमालेका सांसद् राजाराम स्याङ्तानलाई अत्याधिक मतले हराउँदै मकवानपुर २ बाट प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् ।